Ikhaya Policy Cookie
Icookie sisiqwengana seteksti ezithunyelwa ziiwebhu kwisikhangeli kwaye zigcinwa kwisiphelo somsebenzisi, esinokuba yikhompyuter yakho, iselfowuni, ithebhulethi, njl. ezinje ngolwimi kunye nokhetho olukhethwayo, olunokwenza utyelelo lwakho olulandelayo lube lula kwaye lwenze ukuba indawo ilulutho kuwe. Iicookies zidlala indima ebaluleke kakhulu ekuphuculeni amava omsebenzisi kwiwebhu.
Zisetyenziswa njani ii-cookies?
Ngokukhangela kule webhusayithi uyamkela ukuba singazifaka ikuki kumatshini wakho kwaye sazise olu lwazi lulandelayo:
Ulwazi lweenkcukacha-manani ngokusetyenziswa kwewebhu ngumsebenzisi.
Ifomathi ekhethiweyo yokufikelela kwiwebhu kwizixhobo eziphathwayo.
Ukukhangelwa kwamva kweenkonzo zewebhu kunye neenkonzo zokwenza idatha.
Ulwazi malunga neentengiso ezibonisiweyo kumsebenzisi.
Unxibelelwano lwedatha kuthungelwano lwentlalo lwabasebenzisi, ukufikelela kuFacebook wakho okanye kuTwitter.
Iintlobo zeekuki ezisetyenzisiweyo
Le webhusayithi isebenzisa zombini itemporary iiseshoni cookies kunye neekuki ezingapheliyo. Ikuki yeseshoni igcina ulwazi kuphela ngelixa umsebenzisi engena kwiWebhu kunye neekuki ezingapheliyo ezigcinwe kwidatha yesiphelo ukuba zifikeleleke kwaye zisetyenziswe ngaphezulu kweseshoni enye.
Iicookies zobugcisa: oku kuvumela umsebenzisi ukuba azulazule kwiwebhusayithi okanye usetyenziso kwaye asebenzise iindlela ezahlukeneyo okanye iinkonzo apho. Umzekelo, ngolawulo lwezithuthi kunye nonxibelelwano lwedatha, ukufumanisa iseshoni, ukufikelela kumacandelo eWebhu athintelweyo, njl.
Ulwenziwo lwe cookies: Oku kuvumela abasebenzisi ukuba bafikelele kwinkonzo kunye nezinto ezithile ezichazwe kwangaphambili kwisiphelo sakho, okanye useto lomsebenzisi oluchaziweyo. Umzekelo, ulwimi, uhlobo lwesikhangeli ongena kulo kwinkonzo, uyilo lomxholo okhethiweyo.
Uhlalutyo lweenkcukacha manani ikuki: oku kuvumela ukubekwa kweliso kunye nohlalutyo lokuziphatha komsebenzisi kwiiwebhusayithi. Ulwazi oluqokelelwe ngezo cookies lusetyenziselwa ukulinganisa imisebenzi yewebhu, usetyenziso okanye iisayithi zeqonga kunye nokufakwa kwiprofayili kokuhamba kwezi ndawo, ukwenzela ukuphucula inkonzo kunye nokusebenza kwabasebenzisi.
Iikuki zomntu wesithathu: Kwamanye amaphepha ewebhu ungafaka ii-cookies zomntu wesithathu zikuvumela ukuba ulawule kwaye uphucule iinkonzo ezibonelelweyo. Umzekelo, iinkonzo zamanani zeGoogle Analytics.
Unokucima iicookies ngokwenza useto kwisikhangeli sakho esikuvumela ukwala useto lwazo zonke okanye ezinye ii-cookies. Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa iisetingi zesikhangeli sakho ukubhloka zonke iicookies (kubandakanya ii-cookies eziyimfuneko) usenokungakwazi ukufikelela kuzo zonke okanye iinxalenye zesiza sethu okanye ezinye iiwebhusayithi ozindwendwelayo.
Ngaphandle kweicookies ezifanelekileyo, zonke iicookies ziya kuphelelwa lixesha emva kwexesha.